﻿5tips for Resigning Without Burning Bridges ﻿
ဆက်ဆံရေးများကို မပျက်စီးစေပဲ Resign ပြုလုပ်နိုင်ရန် အကြံပြုချက် (၅) ချက်
ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ အလုပ်တစ်ခုကိုနှစ်သက်မှုမရှိတော့တဲ့အတွက် အလုပ်ထွက်လိုလာတဲ့အခါ အထက်လူကြီးရဲ့ရုံးခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီး “ကျွန်တော်တော့အလုပ်ထွက်တော့မယ်” ဟူ၍ တဲ့တိုးပြောချလိုက်ပြီး အလုပ်မှချက်ခြင်းထွက်ခွာလိုတဲ့ဆန္ဒများ ပေါ်ပေါက်လာလေ့ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ခဏလောက်ရပ်နားပြီး စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ . . . တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် သင့်ဘဝတက်လမ်းအတွက် အကျိုးဆက်သက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်လောကဟာ ကျဉ်းမြောင်းလှတဲ့အတွက် . . . သင့်အနေနဲ့ အခြားအလုပ်နေရာတစ်ခုတွင် သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့ ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ပြန်လည်၍တွေ့ဆုံလာရနိုင်ပြီး သူတို့ရဲ့အကူအညီကိုလည်း လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့အထက်လူကြီးကိုသည်းညည်းမခံနိုင်တော့တဲ့အတွက် အလုပ်မှထွက်ခွာလိုသည်ဖြစ်စေ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကို ရရှိလိုက်တဲ့အတွက် အလုပ်မှထွက်ခွာလိုသည်ဖြစ်စေ ဒီအခြေအနေကို တတ်နိုင်သရွေ့ professional ဆန်ဆန်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့က အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆက်ဆံရေးများကိုမပျက်စီးစေပဲ အလုပ်မှအလွယ်တကူထွက်ခွာနိုင်စေဖို့အတွက် ပြုလုပ်လိုက်နာသင့်တဲ့ အကြံပြုချက်အချို့ကို www.jobsinyangon.com ကနေ တင်ဆက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် -
၁။ သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို မပြောမှီ အထက်လူကြီးအား အရင်ဦးစွာအကြောင်းကြားပါ။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ရာတွင် ဒီအကြောင်းကိုသင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူအားလုံးကို ဘာကြောင့်အလုပ်ထွက်မယ်၊ ဘယ်တော့အလုပ်ထွက်မယ်နဲ့ ဘယ်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတာတွေကို အထူးသဖြင့် သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့ ပြောကြားနေဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့မန်နေဂျာနဲ့ နှစ်ဦးတည်းတွေ့ဆုံ၍ အလုပ်မှထွက်ခွာတော့မည့်အကြောင်း အရင်ဦးစွာအကြောင်းကြားအသိပေးခြင်းဟာ အလုပ်မှထွက်ခွာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရာတွင် တစ်ဖက်သားကိုလေးစားမှုအရှိဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့် အလုပ်သင့်ဆုံးအချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းကို သင့်မန်နေဂျာရဲ့ရုံးခန်းအတွင်းသို့ ရုတ်ချည်းဝင်ရောက်၍ ပြောဆိုလိုက်ခြင်းထက် အရင်ဦးစွာ အကြောင်းအရင်းအပြည့်အစုံကို e-mail တစ်စောင်ရေးသားပေးပို့ပြီးမှ ဝင်ရောက်တွေ့ဆုံ၍ အကြောင်းကြားမှုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
၂။ သင့်တော်တဲ့ အသိပေးအကြောင်းကြားစာ (Resign Letter) ကို ကြိုတင်ရေးသား၍ တင်ထားပါ။
ဒါဟာအလုပ်တစ်ခုမှထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ရာတွင် ပုံမှန်ပြုလုပ်သင့်တဲ့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဝန်ထမ်းအများစုက ကြိုတင်အသိပေးမှုပြုလုပ်ရာတွင် အချိန်ကပ်မှပြုလုပ်တတ်တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းရှင်ဖက်မှ အဆိုပါအလုပ်နေရာအတွက် အစားထိုးနိုင်ရန် အလောတကြီးရှာဖွေမှုပြုလုပ်ကြရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီသို့သောလုပ်ရပ်မျိုးဟာ ရင်းနှီးပတ်သက်မှုများ (သို့) ဆက်ဆံရေးများကို သေချာပေါက်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်များထဲတွင်ပါဝင်နေပြီး သင့်အနေနဲ့လိုအပ်လာနိုင်တဲ့ recommendation များကိုတောင်းခံဖို့ ခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ခေါ်ယူခန့်အပ်မှုပြုလုပ်တိုင်းတွင် အလုပ်မှထွက်ခွာပါက ကြိုတင်အကြောင်းကြားမှုပြုလုပ်သင့်တဲ့ ကာလအပိုင်းအခြားကို များသောအားဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားလေ့ရှိတတ်ကြပြီး သင့်အနေနဲ့အလုပ်မှထွက်ခွာလိုပါက (အရေးတကြီးလိုအပ်၍ အလုပ်မှထွက်ခွာခြင်းများဖြစ်တဲ့ - ကျန်းမာရေးပြဿနာနှင့် မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးသေဆုံးခြင်း၊ အစရှိတဲ့အကြောင်းအရာများမှလွဲ၍) သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအပိုင်းအခြားအတွင်း ကြိုတင်၍ထွက်စာတင်မှုကိုပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Professional ဆန်နေပါစေ။
အကယ်၍သင့်အနေနဲ့ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွင်အဆင်မပြေမှုများရှိတဲ့အတွက် ထွက်ခွာခဲ့ရတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဘယ်သူကြောင့်၊ ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ အပြစ်တင်ရှုံ့ချမှုများကို သင့်အနေနဲ့ ကုမ္ပဏီအပေါ်(သို့မဟုတ်) သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့ အထက်လူကြီးအပေါ် ဘယ်လောက်ပဲမကျေမချမ်းဖြစ်နေပါစေ အပြင်တွင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ သင် Resign ပြုလုပ်စဉ်တွင်လည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလေးလေးစားစားဆက်ဆံသင့်ပြီး resignation letter အတွင်းတွင် ရိုင်းပြသောအသုံးအနှုန်းများသုံးနှုန်းခြင်း (သို့မဟုတ်) resign တင်ပြီးနောက် အလုပ်ကိုပျင်းရိစွာလုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
သင့်အထက်လူကြီးမှချမှတ်ထားတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တိုင်းကိုလိုက်နာ၍ သင့်ရဲ့ notice period အတွင်းတွင် လုပ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စများကို ပုံမှန်အတိုင်းကြိုးစား၍လုပ်ကိုင်ပေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့သူများနှင့် အသိအကျွမ်းဖြစ်နေခြင်းအားဖြင့် ဒီဆက်သွယ်ပတ်သက်မှုများအပေါ်အမှီသဟဲပြု၍ သင်လိုချင်တဲ့နေရာတစ်ခုသို့ရောက်ရှိအောင် သွားရောက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုများဟာ လွန်စွာတန်ဖိုးရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်ထွက်စာတင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း မိမိရဲ့လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်များနဲ့ လက်စသတ်လုပ်ကိုင်စရာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းပရောဂျက်များကို အရည်အသွေးအကောင်းမွန်ဆုံးနှင့် ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ကိုင်၍ အပ်နှံပေးသင့်ပါတယ် (သို့မဟုတ်) လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်များကို ဝန်ထမ်းအသစ်ထံသို့ သေသေချာချာလွှဲပြောင်းပေးအပ်မှုပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
၄။ မိမိနဲ့မဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းများကို ယူဆောင်မသွားပါနဲ့။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ ကုမ္ပဏီမှပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှကို ကုမ္ပဏီသို့ ပြန်လည်အပ်နှံမှုပြုလုပ်ခဲ့ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မတော်တဆ ယူဆောင်သွားခဲ့မိရင်လည်း ပြန်လည်အပ်နှံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာကို မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့အတွက် ဒီအချက်ကိုအမြဲတမ်းမမေ့လျော့ပဲပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၅။ အလုပ်မှထွက်ခွာမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင်တောင်မှ လိုအပ်တဲ့အကူအညီများကို ပေးအပ်ပါ။
သင့်အနေနဲ့ ယခင်အလုပ်တွင် ကောင်းမွန်ခိုင်မာတဲ့ ရင်းနှီးမှုများကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီး အလုပ်မှထွက်ခွာပြီးနောက်တွင်တောင်မှ ဆက်လက်၍အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်၍ လိုအပ်သောအကူအညီများကို ပေးအပ်နိုင်စွမ်းရှိနေဖို့ကလည်း အရေးကြီးလှပါတယ်။ ယခင်အလုပ်မှ အထက်လူကြီးများနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ရင်းနှီးပတ်သက်မှုများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက် လူသစ်များကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့ ကတိပြုခြင်း၊ လိုအပ်ပါက မိမိကိုဆက်သွယ်နိုင်မည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ပေးအပ်ထားခဲ့ခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် မိမိလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ အလုပ်နေရာနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးခြင်းတို့ကို ဆက်လက်၍ပြုလုပ်ပေးသွားလိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့အလုပ်မှထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ရာတွင် အခြားသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ အထက်လူကြီးများနဲ့ ကတောက်ကဆဖြစ်၍ထွက်ခွာစရာမလိုအပ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ career တက်လမ်းအတွက် တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ အလုပ်မှထွက်ခွာကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါဟာပုံမှန်ပင်ဖြစ်ပြီး ခိုင်မာရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ဟာ အရေးကြီးလှပါတယ်လို့ ပြောကြားရင်းနိဂုံးချုပ်လိုက်ပါရစေ။